Vondrona Eoropeanina : nahazo fitaovana ny Sembana Mijoro | NewsMada
Vondrona Eoropeanina : nahazo fitaovana ny Sembana Mijoro
Natolotra tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny foiben’ny Sembana Mijoro, Morondava Antehiroka, ny fitaovana sy kojakoja fampiasan’ireo olona manana fahasembanana avy amin’ny Vondrona eoropeanina.
Nahitana seza misy kodiarana sy “bequille sous aisselle” izany. Tafiditra ao anatin’ilay fandaharanasa Dinika ity fanomezana fitaovana ity. Tafiditra amin’ity fandaharanasa ity koa ny fanentanana ny mpianatra manerana ny distrikan’Ambohidratrimo.
Efa notetezina ireo sekolim-panjakana 30 hahafahana mampianatra ireo ankizy manana fahasembanana. Nisy ny fizarana antontan-kevitra sy fijerena sarimihetsika hampahafantarana ny mpianatra ny sedra mahazo ny ankizy sembana nandritra ny fitsidihana sekoly.
Mbola vitsy ny zaza sembana mandeha any an-tsekoly. Na izany aza, efa miha tafita ny hafatra. Misy sekolim-panjakana iray manana mpianatra jamba anankiroa ary mpampianatra jamba no mampianatra azy.